I-China DTY polyester enezimbobo abakhiqizi bendwangu ye-mesh kanye nabaphakeli |Huasheng
Kuyaphefumula.Ukuzizwa kwesandla okuthambile.Ukunwebeka kancane.Bona-phambili.
I-Wicking Umswakama, I-Anti-Bacterial, Ukupholisa
Le ndwangu ye-DTY polyester mesh, inombolo ye-athikili yethu i-FTT10267, inezikhala ezinezimbobo eziyingqayizivele.Lena indwangu enetha ephefumulayo futhi ethambile.Ngesikhathi esifanayo, ngenxa yezici zobuchwepheshe zentambo ye-DTY, inokwelula kancane.
Ngesakhiwo esinezikhala esinezimbobo nokubukeka ngendlela ebonakala ngayo, le ndwangu ye-DTY polyester enembobo enembobo ifaneleka ulwelwesi lwezingubo ezivamile, izikhindi ze-athletic, nezinye izihloko zezimpahla zokungcebeleka.
I-DTY ibizwa nge-polyester drawn textured thread, ephathwa ngokushisa futhi yasontiwe.Intambo ye-DTY polyester izodala ukuthinta okuthambile nokunethezekile kwendwangu ye-warp knit mesh.Lezi zinhlamvu zenza indwangu ye-DTY njengesengezo esihle kakhulu emhlabeni wezindwangu nezindwangu.Ziza ngemibala ehlukahlukene namaphethini.
Ukuze kuhlangatshezwane namazinga aqinile ekhwalithi yamakhasimende, lezi zindwangu ezinezikhala zikhiqizwa imishini yethu yokunitha esezingeni eliphezulu eyethulwe evela e-Europe.Umshini wokweluka osesimweni esihle uzoqinisekisa ukunithwa okuhle, anezikhala ezifanayo, nokuthungwa okucacile.Abasebenzi bethu abanolwazi bazozinakekela kahle lezi zindwangu ze-mesh kusuka ku-greige eyodwa kuya kokuqeda eyodwa.Ukukhiqizwa kwazo zonke izindwangu ze-mesh kuzolandela izinqubo eziqinile ukuze kwanelise amakhasimende ethu ahlonishwayo.
I-Huasheng isebenzisa imicu yekhwalithi ephezulu ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kanye nekhwalithi yezindwangu zethu ezinezikhala zidlula izindinganiso zemboni yamazwe ngamazwe.
Ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile ukuze kuqinisekiswe ukuthi izinga lokusebenzisa izindwangu ze-mesh likhulu kuno-95%.
U-Huasheng wethula uchungechunge olusha lwendwangu ye-mesh njalo ngenyanga.
I-Huasheng ihlose ukuqhubeka nokudala inani eliphezulu lamakhasimende.Asigcini nje ngokuhlinzeka ngezindwangu zethu ze-mesh kumakhasimende ethu, kodwa futhi sinikeza isevisi enhle kakhulu nesixazululo.
Ngolwazi lweminyaka eyi-16 lwezindwangu ezinezikhala, i-Huasheng isebenzele amaklayenti amazwe angama-40 emhlabeni jikelele.
Okwedlule: Indwangu ye-polyester football eyelet mesh
Olandelayo: Indwangu ye-DTY polyester mesh enezikhala zedayimane
Indwangu Enhle Yokunetha Ye-Mesh
Indwangu ye-Mesh Netting
Indwangu ye-Poly Mesh
Indwangu eyenziwe ngokwezifiso ye-polyester ehlanganisiwe yenyoni yamehlo...
Indwangu eyenziwe ngokwezifiso ye-polyester yezemidlalo yenyoni yamehlo...
Indwangu ehlanganisiwe ye-polyester micro mesh yezingubo zemidlalo...
Heavyweight 100% polyester anezikhala Indwangu yokudlala...
88% Inayiloni 12% indwangu enwetshiwe yamandla e-spandex
I-Dri ilingana 100% i-polyester birdeye bird eye mesh fa...